Mourinho Oo Dhulka Ku Jiiday Frank de Boer: "Waa Macalinkii Ugu Xumaa Taariikhda EPL" %
Isagoo fadhiya shirka Jaraa’id ee ka horeeya ciyaarta ay Old Trafford, kula dheelayaan Sevilla kulanka Champions League, ayuu Jose Mourinho ujawaabay macalin Frank de Boer, kaasoo wax ka sheegay siyaasadiisa dhalinyarda.
Tababarihii hore ee Ajex, kaasoo hadlay maalintii Sabtida ayaa wuxuu Mourinho, ku dhaleeceeyay inuu ciyaartoyda yar-yar ama dhalinyarada ah uu dheelsiiyo kulamo aan loo baahneen, taasina ay tahay Khamaar.
Laakiin, Mourinho oo si caro ugu jawaabay De Boer, ayaa wuxuu ku tilmaamay inuu yahay macalinkii ugu xumaa taariikhda oo dhan soo mara horyaalka Premeir League, isagoona faah-faahin dheeri ah ka bixiyay
“Waxaan akhristay, qaar kamid ah hadalo uu sheegay, macalinkii ugu xumaa taariikhda oo dhan Premier League [waa] Frank de Boer,” ayuu Jose Mourinho si usheegay warbaahinta, mar wax laga weydiiyey sheekadaas.
“Wuxuu helay Todobo kulan, Todobo guul daro iyo Gool la’aan, wuxuuna dhahayaa [Rashford] ma uusan helin macalin fiican, sida aniga oo kale,” ayuu hadalkiisa ku daray macalinkii hore ee Real Madrid.
“Hadii uu aniga macalinkey ahaan lahaa, wuxuu ibari lahaa sida loo guul dareystay, maxaa yeelay wuxuu khasaaray kulan walba,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, ninkaan udhashay wadanka Portugal.
Champions LeagueFrank de BoerJose MourinhoMan United vs Sevilla
Shaxda Rasmiga Ah Stoke vs Man City Oo La Shaaciyay – Yay Kusoo Bilaabeen Labada Macalin